Warshadaha quwadda Nuclear-ka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Warshadda quwadda korontada Nuclear-ka ee Ringhals
Kärnkraft 30 år
Warshadaha quwadda Nuclear-ka
La daabacay tisdag 23 mars 2010 kl 14.19
Dawladda dalka Iswiidhen hoggaankeeda heeysa ayaa manta oo ey ka soo wareegtey 30-don sannadood kolkii bulshada dalka cod looga qaadey dhismaha quwadda korontada ee Nuclearka, ey soo bandhigtay hindisaha qorshaheeda la xiriira dhismo cusub iyo casriyeeynta warshadaha dhaliya quwadda korontada ee nuclearka.
Mooshinka ayaa la soo hordhigay xubnaha baarlamanka sannad dabadii kolkii afarta xisbi ee ku bahoowday awoodda dalku shaaciyeen heshiis ey ka mideeysan yihiin. Heshiiskaasina oo oranaya in kuwo cusub lagu badali karo/doono kolka ey tobanka warshadood ee quwadda korontada ee nuclearku gaboobaan.
Xubnaha baarlamanka ayaa la filayaa iney u codeeyaan mooshinkaa bartamaha bisha Juun, iyadoona aan xaqiiqdii la oran Karin in haa loogu codeeyn doono. Maadaama ey ku filan tahay oo keliya afar xubnood ee ka tirsan xisbiyada haya talada dalka iney la codeeyaan mucaaradka.
Illa iyo hadda laba ka tirsan xubnaha baarlamanka ee xisbiga Dhexe ee Centerka, ahaana xisbi lagu yiqiiney diidmada warshadaha noocaasiya ayaa sheegey iney mooshiinkaa diidmo ugu codeeyn doonaan. Halka uu mudane ka baxay xisbiga mudaraat-ka iyo mid kale oo ka tirsan xisbiga dhexe ee Centerka, lana yiraahdo Sven Bergström – albaabka u fureen iney maya ugu codeeyn doonaan mooshinkaa.
Sven Bergström ayaa sheegey inuu ku jah wareersan yahey aaminkiisa iyo sida uu daacadnimada ugu ahaan lahaa xisbiga uu baarlamanka u matalo.
- Waa xaalad cakiran in go’aan laga gaaro iyo halka ey ku dambeeyn doonto. Bishii agoosto ee sannadkii 2006, waana bishii ka horreeysey doorashada iney xisbiyada awoodda dalka hayaa ku dhawaaqeen si wada jir ah in diidmada dhisma cusub ee warshadaha awoodda korontada ku shaqeeya, iyadoona uu madaxa dawladda Fredrik Reinfeldt ku celiyey fikirkaa mar uu bishii oktoober ee isla sannadkaa soo bandhigayey dhabbaha siyaasadda dawladdiisa ee isla sannadkaa 2006, sida uu sheegey Sven Bergström, ahna xubin xisbiga Dhexe ee Centerka uga tirsan baarlamanka, mar ay wareeysi la yeelatay idaacadda wararka ee Ekot.
Haddii ey xubnaha baarlamanku ugu codeeyaan haa mooshinkaa, ayaa sababi doona in tirtiro go’aammo uu uu baarlamanka dalku horey u gaarey sannadihii 1984 iyo 1997, lana xiriiray mamnuucidda dhismaha iyo baabi’inta warshdaha quwadda korontada ee ku shaqeeya Nuclearka.
Codeeyntii shacbiga ee sannadkii 1980-kii ayaa bulshada suurtagal loo siiyey iney codkooda ka dhiibtaan saddex arrimmod, dhammaantoodna la xiriireen baabi’inta warshadaha quwadda korontada ee nuclearka ku adeega.
Ma aaney jirin suurtogal ah in dhismahooda loogu codeeyo, halka aan sidoo kale la shaacin taariikhda ugu dambeeysa ee la baabi’inayo. Codkii waagaasi la qaaday ayey 59% bulshadii codeeysey u codeeysay in la baabi’iyo.